Warar Hordhac ah oo ka soo baxaya sababihii dhaliyay Qaraxii Beirut - Jowhar Somali news Leader
Home News Warar Hordhac ah oo ka soo baxaya sababihii dhaliyay Qaraxii Beirut
Waxaa soo baxaya warar hordhac ah oo ku saabsan sababta keentay qaraxii shalay gilgilay caasimada dalka Lubnaan ee Beirut.
Tirada dadka ku dhintey qaraxan ayaa gaartay 78 ruux halka uu dhaawacana kor u dhaafay 4,000 oo ruux.
Madaxweynaha dalka Lubnaan Mishaal Cown ayaa sheegay in 2,750 tan oo ah maadada ammonium nitrate si aan ammaan ahayn loogu keydiyay makhaasiin halkaa ku yaallay dekeda Beirut muddo lix sano ah uu sababay qaraxa.
Cisbitaaladda ayaa waxaa buux dhaafiyay dhaawacyada, waxaana qaraxa uu gebi ahaanba dhulka dhigay dhismayaal badan. Qaraxa maadada ammonium nitrate ayaa hawada ku sii deyn kara gaas sun ah
Mas’uul ka tirsan dowladda Israa’iil ayaa waxa ay sheegeen in dalkiisa aanu wax lug ah ku lahayn qaraxa Beyrut.
sawiraad qaraxa magaalada Beirut
AFRICOM oo kordhineysa weerarada ay u qaadaan Alshabaab
Dowlada oo sheegtay in Howlgal ay ku dishey saraakiil ka tirsan Al-Shabaab